कांग्रेसमा को को बन्दैछन् उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री ? – Rajdhani Daily
कांग्रेसमा को को बन्दैछन् उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री ?
पदाधिकारी र बाँकी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न नसकेको भन्दै पार्टी पंक्तिबाटै चर्काे आलोचना खेपिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बाँकी सदस्य, सहमहामन्त्री र महामन्त्रीपछि मात्रै उपसभापति मनोनयन गर्ने धारणा अघि सारेका छन् । उपसभापति मनोनयनमा चर्काे विवाद देखिने भएपछि सभापति देउवाले यस्तो धारणा अघि सारेका हुन् ।
सभापति देउवाले आफ्नो पछिल्लो योजनालाई लिएर आइतबार आफूनिकट नेताहरू बालकृष्ण खाँण र डा. प्रकाशशरण महतसँग सल्लाहसमेत गरेका छन् । तरुण दलको महाधिवेशन केही दिन पर सार्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भए पनि देउवाले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषयमा पनि कुराकानी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार, छलफलमा सभापति देउवाले महामन्त्री र सहमहामन्त्रीपछि मात्रै उपसभापति मनोनयन गर्दा कस्तो होला भनी जिज्ञासा राखेका थिए । उनले मनोनयनमा जति ढिलाइ ग¥यो, त्यति नै नराम्रो सन्देश जाने भन्दै दसैंअघि नै सहमहामन्त्री र महामन्त्री मनोनयन गर्ने योजनामा आफू रहेकोसमेत बताए ।
देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएको ६ महिना बित्न लागिसकेको छ । यति लामो समय बितिसक्दा पनि उनले एकजना पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेस विधानमा सभापतिले एक–एक उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीलाई पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उनले अझै १० केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पनि बाँकी नै छ । उनले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि कसैलाई दिन सकेका छैनन् । यसैगरी, उनले पार्टीको ४२ विभागमा पनि मनोनयन गर्न बाँकी छ ।
देउवाले पदाधिकारी मनोनयन गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण उपसभापति पद रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । देउवा सकेसम्म आफूनिकट विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति बनाउन चाहन्छन् । निधिलाई उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाएर पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएका उनी अझै पनि निधिलाई नै उपसभापति बनाउने लविङमा छन् । तर, प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले पनि उपसभापति नै दाबी गरिरहेकाले उनी अप्ठेरोमा परेका हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय भुक्तान गरेका खड्कालाई उपसभापतिको जिम्मेवारी दिँदा गलत सन्देश जानेमा उनी बढी नै सचेत देखिन्छन् । त्यसैले उनी उपसभापति मनोनयनलाई जतिसक्दो घचेट्न चाहन्छन् । मनोनयनलाई जति घचेट्न सक्यो त्यति नै खड्कालाई गलाउन सकिने उनको बुझाइ छ । देउवाका अर्का विश्वासपात्र गोपालमान श्रेष्ठले पनि उपाध्यक्षको दाबी छाडेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार, देउवा पूर्वसहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री मनोनयन गरेर खुमबहादुरलाई रिझाउने पक्षमा छन् । निधिलाई उपसभापतिमा समर्थन दिए पूर्णबहादुरलाई महामन्त्री मनोनयन गर्ने सन्देश पनि देउवा पक्षले दिएका छन् । देउवा पक्षबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँड महामन्त्रीका दाबेदार हुन् । खाँड मन्त्री भइसकेकाले उनको सम्भावना भने देखिँदैन ।
सभापति देउवा खुमबहादुरलाई उपसभापति बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा आए कार्कीलाई महामन्त्री बनाउने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार, निधिले उपसभापतिको पनि दाबेदारी नछाडेकाले यो सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ ।
खुमबहादुर पक्षले सहमहामन्त्रीमा पनि दाबी गरिरहेको छ । निधिलाई उपसभापतिमा मनोनयन गर्न समर्थन दिए खुमबहादुरनिकट पुष्पा भुषाललाई सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने पक्षमा देउवा छन् ।
अर्काेतर्फ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले पनि विगतको परम्परा भन्दै सहमहामन्त्री आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले देउवा पक्षधर नेता पूर्णबहादुरलाई सहमहामन्त्रीमा मनोनयन गरेको नजिर देखाउँदै पौडेल पक्षधरले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
देउवा सहमहामन्त्रीमा आदिवासी, दलित या महिलामध्येबाट मनोनयन गर्ने मुडमा छन् । तर पौडेल पक्षधर नेताले भने महेश आचार्य, आनन्द ढुंगाना र दिलेन्द्र बडूको नाम अघि सारेका छन् ।